Ngwongwo nke Brazing na-arụ ọrụ na-emepụta ihe nkiri
Home / ngwa / Brazing imebi / Ngwunye Brazing Nchara Ngwá Ọrụ
Ngwongwo na-eme ka ọlaọcha na-agba agba
Category: Brazing imebi Tags: na-acha ọla edo, bracing igwe anaghị agba nchara, nnukwu brazing ugboro ugboro, ntinye aka na brazing igwe anaghị agba nchara, RF brazing igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara brazing, igwe anaghị agba nchara kpo oku
Ngwongwo na-emepụta ihe na-eme ka Brazing na-arụ ọrụ na-emepụta ngwá ọrụ RF
Iji mee ka nkwonkwo atọ dị na nkwonkwo ezé na-eme ka ọkpụkpụ kpoo ọkụ; iji meziwanye nhazi nke mkpụrụ na belata oge.
Igwe anaghị agba nchara prophy nose ibe, akpa abụọ, tube nkwado collar, braze alloy yiri mgbaaka, B1 ọsọ
1400 F F
DW-UHF-4.5kW RF Ngwá Ọrụ Ike Ngwá Agha Ngwá Ọrụ, nke a na-ahazi na-arụpụta (mgbidi)
Emere ule mbụ iji guzobe profaịlụ na oge okpomọkụ na chasa. E kpebisiri ike na usoro abụọ ga-eweta nsonaazụ kachasị mma. Maka ngwa a, a na-emepụta ụzọ anọ, a na-eji mpempe akwụkwọ na-emepụta okpukpu abụọ ka ọ na-enyefe ọbụna okpomọkụ na mpaghara ndị ejikọtara ya. A na-agbakọta tubụ abụọ ahụ, ngwongwo ngwongwo na mpempe aka na-ejikọta ya na ntinye oge. A na-etinye ihe nkedo a na-agbanye ígwè na ngwongwo nke B1 maka mgbakọ ahụ dum. Na nhazi mbu nke usoro oku ahu, etinyere ngwugwu nkpo nke nzuko ahu na mpaghara oku a na enyere ndi 10 nkeji. Na nkeji abụọ, nzukọ ahụ gbanwee ma nkwụsị njedebe nke mgbakọ ahụ ewe iwe ọkụ maka 10 sekọndrị ọzọ. E wepụrụ mgbakọ ahụ, saa ya na mmiri ọkụ iji wepụ ya, ma kpoo ọkụ na ikuku dị ọkụ.
Ejiri ya mee, enwere ike nweta ihe nkwughachi ya na ikikere DW-UHF-4.5kW na 10 nke okpukpu abụọ. A na-ejikọta nkwonkwo nkwonkwo ọbụla na ntinye akwụkwọ
Ngwongwo ugbo ugbo ugbo elu